Izifo eziqhelekileyo zeguppy kunye neebhaktiriya | Ngeentlanzi
URosa Sanchez | | Izifo zentlanzi, Guppy
Akukho bambalwa izifo kunye neebhaktiriya ukuba i-guppy inokufumana ikhontrakthi, nangona kunjalo kukho iinkqubo ezininzi, eziqhelekileyo njengezo zaziwa njenge ichaphaza elimhlophe. Ukuba i-guppy inamabala amhlophe alinganayo entloko emzimbeni nasemaphikweni ayo, inesifo esaziwa njenge ichthyophthirius.
Isiphene esaziwa njenge isifo sevelvet, yinto engaqhelekanga kwizidleleli, kodwa ngeli xesha amabala mancinci kakhulu, kangangokuba, rhoqo, Umzimba weguppy ubonakala ngathi unengubo yevelvet. Oku kubangelwa sisidleleli saseOadinium, sihlasela kakhulu imiphunga, ukuphefumla okungalawulekiyo kunye nokuziphatha kokungakhathali zizimpawu zokuqala zesifo.
Uninzi lwezifo zegciwane kunzima ukulwa. Babonakalisa ngeendlela ezahlukeneyo. Rhoqo iimpiko ziyangqubana, zibonakale zinemigca ebomvu kwaye yopha emzimbeni. Olona nyango lusebenzayo kukusetyenziswa kwee-antibiotics. Unyango lwe-Antibiotic akufuneki lwenziwe ngaphandle kokubonisana nengcali.
La isifo esaziwa ngokuba yiColumnaris Ikwayintsholongwane eyosulela kwintlanzi njengengubo yokwaleka. Iiguppies ezichaphazelekayo zineentloni, zidada ngokuhamba okungahambelaniyo, kwaye amaphiko azo asongelwe emzimbeni. Esi sifo ukulwa neziyobisi ezizodwa.
Ukuthintela izifo ezibangelwa ziintsholongwane, kufuneka kuqinisekiswe ukuba Iintlanzi zihlala kwiimeko ezingathandekiyo. Ezi ntlobo zebhaktiriya zisasazeka ngokutya okonakeleyo kunye nezinto zezityalo eziphilayo.
Ukulwa nolu hlobo lweebacteria ngaphandle kokusebenzisa imichiza, iimeko zendalo zinokuphuculwa, ezinje phucula umgangatho wamanzi, Ukubonelela ngokutya okunesondlo, ukutya okugayeka lula nokuhambisa ubushushu, okuya kuthi kwandise impendulo yomzimba wentlanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Guppy » Izifo eziqhelekileyo zeguppy kunye neebhaktiriya
IGuppy yam inomsila onamatheleyo, ndingamphilisa njani? Enkosi
Ndinengxaki neentlanzi zam, ndiyintsha kwi-aquariums kwaye bendinayo okwexeshana (malunga neentsuku ezingama-20), bendikhe ndabona abantwana bam basetyhini iintsuku ezininzi kwaye kukho abanye abangakhathaliyo, abadli nokutya, qubha ngeentshukumo ezingaqhelekanga kwaye unamabala amhlophe kuphela kwimiphetho, abanye sele beswelekile, banokuba nasiphi isifo? Kwaye iya kuba sisisombululo santoni? E-aquarium ndinamaguppies kuphela kunye ne-prawns neocaridinas blue velvet kunye ne-caridinas crystal red. Ndiyabulela kakhulu kwangaphambili.